:Bọchị: Disemba 5, 2019
Maka ụgbọ elu Siirt Airport Terminal Building Renovation Construction Work N'ihi nke 2019 / 575301 GCC dị nro bara uru nke General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu State (TCDD) bụ 22.205.909,39 TL na ọnụego ọnụego bụ 29.591.926,00 TL. [More ...]
General Directorate nke okporo ụzọ ebubatala ụgbọala ọhụrụ
Minista Turhan, Onye isi ndị isi n'okporo ụzọ dị elu (KGM) afọ a n'ihi ọrụ ịbanye na igwe na-ere snow na igwe na-edozi ụzọ, kwuru na ememe. Turkey si iga ebe 'na-atụgharị azụ na wheel, na ụgbọala na-aga site na "aka iso obibia ụzọ [More ...]
A na-enyo ụgbọ elu Sakarya City maka Transportgbọ njem Ahụike
A na-enyo ụgbọ ala Sakarya City maka Transportgbọ njem Ahụike; Obodo Sakarya na-aga n’ihu na-eme nhicha ya na ụgbọ njem ọha na eze. Na nkwupụta nke Directorate nke Publicgbọ njem Ọha na-ekwu, [More ...]
Oge Eke Ọhụrụ na Sakarya Kart54 Kiosks
Emeputara ihe ohuru na kart54 kiosks. Site na njirimara ọhụrụ a, enwere ike ịzụta Card zuru ezu site na ebe ndochi. Iche ọdịiche nke 10 nke obodo site na Ngalaba Transportgbọ njem nke Obodo isi obodo Sakarya [More ...]
Mahadum Karamanoğlu Mehmetbey ga-akpọ ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Karamanoğlu Mehmetbey University Rectorate na ngalaba ndị a, 2547 gụrụ Iwu Nkụzi Elu na nhọpụta nke ndị otu dị ka iwu ndị dị mkpa dị na Regulation. [More ...]
Njikọ Bursa Courthouse Junction
Button rụgidere maka njikọ Bursa Courthouse; Thelọ ikpe ọhụrụ ahụ, ebe Sayensị na Teknụzụ, Ihe Ngosipụta, Buildinglọ Ngalaba ndị uweojii na-aga n'ihu na Gökmen Space na Aviation Center na-arụ. [More ...]
Mgbe ụzọ ụgbọ oloko Projects Ọnọdụ na Turkey
Mgbe ụgbọ oloko Istanbul ahụ, nke butere nsogbu akụ na ọghọm ndị ahụ butere ebumnuche, anya tụgharịrị na ọrụ mmepe obodo na-aga n'ihu n'obodo niile. Obodo CHP Mersin na-achọ mgbazinye ego maka metro na Bursa na Kocaeli metro [More ...]
Mayor Altay kwuru okwu banyere Konya Metro na itinye ego ndị ọzọ
Onye isi obodo nke Konya Metropolitan Ugur Ibrahim Altay, zutere ndị nta akụkọ na Konya mere nyocha nke a. Onye isi obodo nke Konya Metropolitan Munğ Uğur İbrahim Altay, ya na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara na nke mba [More ...]
N'ime ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa nke Oge mbu; Na 2010, ọrụ mweghachi ahụ na Haydarpaşa Railway Station, nke nwere ọkụ n’elu ụlọ ma mebie ya, rụchara oke. TRT na nke mbụ ọnọdụ ọhụụ gbasara ụlọ ụlọ ọrụ [More ...]
Onweghi Nzoghari azu na Kartepe Cable Car Project
Mustafa Kocaman, Onye Isi Obodo nke Kartepe, so onye isi 32 zukọta n'ụlọ nzukọ nke ime obodo. Mayor Kocaman T Ritaị ụzọ ahụ a ga-ewu na Derbent bụ ọrụ a lekọtara ma na-efu kemgbe ọtụtụ afọ. [More ...]
Mmemme Fgwọ Ọrụ Cargba Bgwọ Bursa Uludağ na Oge Ọrụ Na Parkgwọ Cargbọala 2019; Ski abọli Bursa, Turkey mbụ akara nke cable ụgbọ ala. Emeghewo 29 October na 1963. Otu n'ime obodo akara Bursa [More ...]
Great Ohere E-Bike Bicycle Industry na Turkey
Turkey chere ihu oké ohere na ịnyịnya ígwè ụlọ ọrụ: e-anyịnya igwe. Achọrọ maka e-igwe kwụ otu ebe, makwaara dị ka elektrikli pedal-elektrik na-enyere aka na ụwa, na-eto n'ike n'ike. Turkey mere e-anyịnya igwe na isi suppliers nke mba Europe [More ...]
Ntị ndị ọkwọ ụgbọala ..! Anadolu Motorway 5-20 ka emechie
Ntị ndị ọkwọ ụgbọala ..! A ga-emechi Anatolian Motorway 5-20 na December; Ngalaba Izmit East Junction-Adapazari Junction nke Anatolian n'okporo ụzọ Ankara, n'ihi nrụzi arụmọrụ na ndozigharị arụ ọrụ 5-20 na Disemba 08.00-18.00 [More ...]